नेपालको सोसल मिडिया पनि जनमानसमा ‘ह्विम’ ल्याउन सशक्त भइसकेको छ: दिलिप आचार्य - MeroReport
नेपालको सोसल मिडिया पनि जनमानसमा ‘ह्विम’ ल्याउन सशक्त भइसकेको छ: दिलिप आचार्य
ब्लग एक विषय अनेक, दिलीप आचार्यको ब्लग डिआचार्यमा भिजिट गर्ने जो कोहीले सहजै भन्नसक्छन् । पेशाले निजी कार्यलयका अलावा अध्यापनमा समेत सक्रिय काठमाण्डौंका दिलीप आचार्य ब्लगका अलावा सामाजिक संजाल बिशेषगरी फेसबुकर ट्विटरमा पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् । आफुलाई जुनवेला जुन भाव र प्रभाव रहन्छ त्यही रुपमा ब्लगमा प्रस्तुत हुन रुचाउने आचार्य वास्तविक र अवास्तविक दुवै संसारमा ‘जे छन् त्यही’ रुपमा परिचित हुन रुचाउँछन्, यसैको प्रतिविम्ब देखिन्छ उनको ब्लगमा पनि । कैले ब्लगर, कैले नागरिक, त कैले छोरा, अनि कैले बाउ र कैले पतिका रुपमा । ‘टोटालिटीमा जे छु त्यसरी नै चिनिन्छु सायद’ भन्ने उनै दिलीप आचार्यलाई यो साता हामीले मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताको ब्लगरको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं । प्रस्तुत छ मेरोरिपोर्टका लागी पवन न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
तपाईंको ब्लग डिआचार्यको बारेमा शब्दचित्र प्रस्तुत गरिदिनुस् न ।
मेरो ब्लग डि आचार्यलाई मेरो प्रतिबिम्ब मान्दा फरक पर्दैन। एउटै मानिस कहिले प्रेमी, कहिले विद्रोही, कहिले प्राविधिक कहिले आध्यात्मिक जे पनि हुनसक्छ । मानिसमा यी सबै नैसर्गिक गुणहरू हुन्छन् । त्यसै अनुसार म माथि जुनबेला जुन भावको प्रचुरता र प्रभाव रहन्छ त्यो बेला त्यही रूपमा ब्लगमा प्रस्तुत हुन्छु । समष्टिमा म भित्र भएको र हुने हरेक भाव, विचार र सूचना र ‘रस’ मेरो ब्लगमा अभिव्यक्त हुन्छन ।
२००७ को सेप्टेम्बरदेखि ब्लग गर्न थालेको हुँ ।
अहिलेको समयमा ब्लग अभिव्यक्तिको सर्वोत्तम माध्यम हो । तैपनि ‘किन’ भन्ने शब्दमा केन्द्रित हुने हो भने, म विचार र सूचना बाँड्न ब्लग गर्छु । यो प्रश्नको छोटो उत्तर यही हो । यही प्रश्नको यथार्थ परक वा सटिक उत्तर चाहनुहुन्छ भने मैले यसै विषयलाई आधार बनाएर लेखेको तानसेन, हरिदास र ब्लगरहरु भन्ने पोस्ट पढन सुझाउँछु म ।
म, मैले ब्लगमा लेख्ने कुनै पनि विषयको विशेषज्ञ हैन् । त्यसैले कुनै पनि विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरो पनि भएन र कुनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सोही विषयमा लेख्ने गर्दिन। माथि नै भनिसकेँ । जुन जुन बेलामा म मा जे जे भाव हावी हुन्छन् त्यो बेलामा त्यही विषयमा लेख्छु ।
समसामयिक बिषयबस्तु, ब्यंग्य आलेख, मुक्तक, लघुकथा, टेक्नोलोजी प्रविधी लगायतका बिबिध सामग्री तपाईंको ब्लगमा छन् । यि मध्ये रोज्नपर्दा कुन चैं लाई रोज्नुहुन्छ र किन ?
हो, रोज्ने भन्दा पनि पाठक प्रतिक्रिया र ‘भ्यूअर फिडव्याक’ हेर्दा भने चाहिँ म सायद लघुकथा र प्राविधिक विषयमा अलि बढी खुल्न सक्छु कि जस्तो लाग्छ ।
ब्यंग्य आलेखहरु पनि निक्कै छन तपाईको ब्लगमा, कसरी छनौट गर्नुहुन्छ बिषयबस्तु ?
व्यङ्ग्यको कुरा पनि आफूले देखेको-भोगेको कुरा नै केही मसला हालेर शब्दमा उतार्ने मात्रै हो । व्यङ्ग्यमा पनि धेरै सत्यता नै हुन्छन । त्यसैले साँच्च् भन्नुपर्दा आफ्नो अनुभव र भोगाई नै व्यङ्यमा उतार्छु । कुनै विषयबस्तु चयन गरेर मलाई ‘यो विषयमा लेख्’ भनियो भने म ‘निकम्मा लेखक’ साबित हुने छु J ।
तपाईंलाइ ब्लगका निम्ति लेख्न मन पर्ने बिषय र पढ्न मन पर्ने बिषय उही हुन या आफूले लेख्दा फरक र अरुले लेखेको पढ्न फरक बिषयहरु हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
लेख्न मनपर्ने भन्दा पनि ‘लेख्न सक्ने’ भन्दा अलिक सहि होला सायद । Samuel Johnson ले कतै भनेका छन्: "What is written without effort is in general read without pleasure.", त्यसैले मेरो अनुभव, अध्ययन र भोगाइको आधारमा मैले लेख्न सक्ने विषयवस्तुको दायरा सीमित छ । म सीमित विषयमा मात्रै लेख्न सक्छु । तर पढ्नका लागि मेरो पहुँचमा असीमित विषय र विधाहरू छन् । अझ प्रस्ट गरेर भन्दा म थोरै कुरा लेख्छु र धेरै कुरा पढ्छु । मलाई भेटे सम्मको विविध विषय पढ्न मन लाग्छ ।
आफूले लेख्न चाहेको तर लेख्न नभ्याएको बिषय छ कुनै ?
छन् । धेरै छन् ....अझ लेखेर पुरा गर्न नसकेर राखेको आधा-अधूरा कुराहरू पनि निकै होलान् ।
नेपाली ब्लग र सोसल मिडियाको क्षेत्रलाइ तपाईंले कसरी नियाल्नुभएको छ ?
नेपाली ब्लगमा सङ्ख्यात्मक विकास बढी, गुणात्मक विकास कम भएको कुरा हामीले मान्नै पर्छ । ब्लगको अवधारणा नबुझेर हो वा नीच मारेर हो सिधै पत्र-पत्रिकाका समाचार र आलेखलाई हुबहु सारेर पन्ना भर्ने, अनि अर्काको लेख रचना ‘कपि-पेस्ट’ गरेर ब्लगर बन्न खोज्ने ठूलै जमात सक्रिय भएर यो विधाको अवमूल्यन समेत भएको छ । तर यो एउटा नितान्त रचनात्मक विधा हो र मलाई लाग्छ यसको उपयोगिता र प्रभावकारिता भविष्यमा झन् झन् बढ्दै जानेछ ।
अबको समाजमा सोसल मिडियाले ओगट्ने र प्रभाव पार्ने शक्तिको पनि न्यून मुल्याङ्कन गरिनु हुन्न र नेपालको सोसल मिडिया पनि जनमानसमा ‘ह्विम’ ल्याउन सशक्त भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई । तर सोसल मिडिया भनेको फोटो ट्याग गर्नु, भिडियो सेयर गर्नु वा ‘हा हा, हि हि ’ र ‘लोल, :डि र :पि’ गर्ने स्थान मात्रै हैन, पुरै सामाजिक लहर ल्याउर समाजलाई परिवर्तन गर्ने रचनात्मक कार्यको लागि प्लेटफार्म बन्न सक्ने माध्यम हो भनेर स्थापित हुन भने निकै समय लाग्छ जस्तो लाग्छ ।
समकालीन ब्लगर साथीहरू, वरिष्ठ देखि कनिष्ठसम्म सबैका ब्लगहरू समयले भ्याएसम्म पढने गर्छु । पत्र-पत्रिकाको समाचार सिधै उतार्ने र अर्काको रचना कपि-पेस्ट गर्ने बाहेकका अन्य ब्लगहरू समय मिलेसम्म र भेटेसम्म हेर्छु ।
विषयवस्तु यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर विचार प्रधान, स्वतन्त्र र अझ भन्ने हो भने मौलिक लेखाई भएका ब्लगहरू विशेष चासो दिएर हेर्छु (समाचार हेर्न त पत्रिकाका साइटहरू छँदैछन् नि ।)
मानिस परिवर्तन हुन्छ, समाज परिवर्तन हुन्छ र यो क्रममा मानिसको सोच र विचार परिवर्तनले ल्याउने परिपक्वतामा पुग्छ । सुरुमा मलाई पनि यो आवश्यक छ जस्तो लाग्थ्यो । तर अहिले तत्कालको कुरा गर्ने हो भने, ब्लग जस्तो निर्बन्ध विषयलाई आचारसंहितामा बाध्नु भनेको अनावश्यक मात्रै हैन् करिब करिब असम्भव पनि हो जस्तो लाग्छ । अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको यही एउटा त निर्बाध माध्यम छ यसलाई पनि आचारसंहितामा बाँधेपछि मौलिकता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोज्न कहाँ जाने ? । हो, तर म केवल स्वतन्त्रताको मात्रै हिमायती हुँ, स्वछन्दताको भने हैन् ।
“आचारसंहिता” नै भनेर कुरा गर्दिन । तर राम्रा ब्लगहरुले प्राय: स्वतन्त्रता र स्वछन्दताको नाजुक सिमा रेखा पार गरेका छैनन् ।
ब्लग लेखनकै कारण जापानदेखि अमेरिका र रसियादेखि मध्यपूर्वसम्म रहेका धेरैजना नेपालीहरूसँग एकदमै आत्मीय र घनिष्ठ सम्बन्ध बनेको छ । प्राय: अँझैपनि हरेक हप्ता जस्तो १-२ जना नयाँ साथीहरूको इमेल आदि आउँछ । निकै रोमाञ्चक छ यो ब्लगिङ् क्षेत्र ।
दैनिक ५०० जना जत्तिले मेरो ब्लग हेर्छन् ।
तपाईँ सोसल मिडियामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसलमिडियाका थलोहरु: ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो ?
सबै एक-अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्ने र विचार बाँड्ने माध्यम हुन । मेरो व्यक्तिगत विचारमा प्रभाव र प्रयोगको फरक हेर्ने हो भने सबैभन्दा द्रुत प्रभावशाली ट्वीटर, लामो बहसका लागि ब्लग र यी दुईका बिचका केही अनौपचारिक कुराका लागि फेसबुक चल्छन् ।
छन् आ-आफ्नो विषयको बारेमा प्राय: सबैले सामाजिक हितमै लेखेको भेटेको छु ।
कमेन्ट काउन्ट वा सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएको सङ्ख्याको आधारमा केही फरक पर्लान तर ‘पेज भ्यू’ को आधारमा हेर्ने हो भने ५००० पटक भन्दा बढी हेरिएका मेरा पोस्टहरू के तपाई कम्प्युटरमा नेपाली बाटै लेख्न चाहनुहुन्छ? , ट्वीटरका #वरिष्ठ, #कनिष्ठ र #कर्तव्य निष्ठहरू !! ,के तपाईँलाई गुगलका यी ‘जादूहरु’ को बारेमा थाहा छ?, केही उटपट्याङ मुक्तकहरु, शास्त्रभित्रका विज्ञान र शास्त्रको वैज्ञानिक अध्ययन ! लगायतका हुन् ।
देश-विदेशमा एकदमै आत्मीय धेरै साथीहरू र माया गर्ने मानिसहरू पाएको छु, गुमाउने त कुरै भएन ।
हैन । पहिलो कुरा, ब्लग भनेको पत्रकारिता भन्दा नितान्त फरक विषय र विधा हो । एउटै कुरा भएको भए यसलाई ‘पत्रकारिता’ नै भनिन्थ्यो । अर्को कुरा पत्रकारिता गर्ने पनि सबै ‘नागरिक’ नै त हुन नि ! प्रविधिले जतिसुकै फड्को मारे पनि अहिलेसम्म मेशिन वा ‘भर्चुअल ईन्टेलिजेन्सी’ले समाचार वा लेख बनाउँदैनन । त्यसैले यो पत्रकारिता भन्दा अत्यन्त पृथक विषयलाई अगाडि ‘नागरिक’ थपेर फेरि पनि यो ‘पत्रकारिता’ नै हो भन्ने लेबल जबरजस्ती लगाउनु बेकार हो । ब्लग पत्रकारिता हैन र त यसमा यसको आफ्नै सुगन्ध र सौन्दर्य छ नि !
सूचना र समाचारको जगतमा मेरोरिपोर्टले छुट्टै स्थान बनाउन सफल भएको छ । स्थापनाकाल देखि नै मैले हेर्दै आएको छु । तर जनमानसमा जतिसम्म पुग्नु पर्ने हो त्यत्तिसम्म यसको पहुँच नपुगेको हो कि जस्तो भने बेला बेलामा लाग्ने गर्छ । पत्रकार र ब्लगर मात्रै हैन, यसमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि भरपुर अन्तर्क्रिया गर्न सकिने बनाउन म सुझाव दिन चाहन्छु ।
Comment by Prakash Lamichhane on June 7, 2013 at 12:32pm
Congratulations Dilip ji :)
Comment by Umesh Sigdel on June 5, 2013 at 4:35pm
Comment by Simanta Marasini on June 5, 2013 at 2:00pm
Comment by pawan neupane on June 5, 2013 at 12:23pm
Congratulation Dilip Ji :)